အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအတွက် ဥပဒေပြုမူဘောင် | Open Development Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော လွှမ်းခြုံဥပဒေသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ (၂၃) ရက်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ ဖြစ်ပါသည်။ 1 ဤဥပဒေတွင် အထူးစီးပွား ရေးဇုန် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တာဝန်ရှိအဖွဲ့များဖြစ်သော ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကို သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။2 အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊3 အထူးစီးပွားရေးဇုန်အမျိုးအစားများ၊4 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပေးသည့် အကျိုး ကျေးဇူးများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။5 ဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များတွင် အမျိုးသားစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကို အထောက်အကူပြုရန်၊ အလုပ်အကိုင် တိုးတက်စေရန်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြှင့်တင်ရန် ပါဝင်ပါသည်။6
သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့များ
အထူးစီးပွားရေးဇုန် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တာဝန်ရှိအဖွဲ့များဖြစ်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့- ဗဟိုအဖွဲ့၊ ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာ အထူးစီးပွား ရေးဇုန် ဥပဒေက သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အဖွဲ့ ၁ ဖွဲ့စီတွင် ကွဲပြားခြားနားသော တာဝန်နှင့် အာဏာရှိပါသည်။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အာဏာအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆင့်မြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရေးကို ထိန်းချုပ်သည်။ အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် အထူးစီးပွား ရေးဇုန်များ တည်ဆောက်/ မဆောက် နှင့် တည်ဆောက်မည့်နေရာ၊ ခွင့်ပြုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစားနှင့် ပမာဏ၊ အထူး စီးပွားရေးဇုန်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် မူဝါဒချမှတ်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။7 ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအတွင်း တည်ဆောက်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆိုပြုချက်များ၊ ဇုန်အမျိုးအ စားများ၊ ဥပဒေနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အခြားကိစ္စရပ်များကို ဗဟိုအဖွဲ့သို့ အကြံပြုတင်ပြပါသည်။8 လျှောက်ထားချက်များကို စိစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်း စသည့် သက်ဆိုင်ရာ အထူးစီးပွားရေး ဇုန်များနှင့် ပတ်သက်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စရပ်များအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသည် တာဝန်ရှိပြီး ဗဟိုလုပ်ငန်း အဖွဲ့သို့ တင်ပြပါသည်။9 အမျိုးမျိုးသော စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့များအကြား ဆက်နွယ်မှုများကို သီလဝါ အထူး စီးပွားရေးဇုန်၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဇယားတွင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။10
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းထားသော ဗဟိုအဖွဲ့သည်11 များစွာသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ပေးအပ်ခံရပါသည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များ၌ (၁) အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးအတွက် မူဝါဒချမှတ်ခြင်း၊ (၂) အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးနှင့် အဆိုပြုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ ဌာနများ၏ သဘောထားရယူစိစစ်ခြင်းနှင့် (၃) မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအပေါ် ကြီးကြပ်၍ သဘော တူညီချက်ပေးခြင်း တို့ ပါဝင်ပါသည်။12 အထူးသဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဗဟိုအဖွဲ့ကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းနှင့် ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပါလုပ်ငန်း တာဝန်များသည် ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။13
ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဗဟိုအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ပါသည်။14 ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ဆင်တူသောတာဝန်များ ပါရှိသည့် လုပ်ငန်း တာဝန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုအဖွဲ့သို့ အကြံပြုတင်ပြရပါသည်။15 တစ်နည်းဆိုရသော် ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့သည် အကြံပြုတင်ခြင်းကို ‌ဆောင်ရွက်ရပြီး ဗဟိုအဖွဲ့သည် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တစ်ခုစီတွင် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ တစ်ရပ်စီကို ဗဟိုအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။16 ကော်မတီ တစ်ရပ်စီ၌ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီ ပါဝင်ပါသည်။17 စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် ဗဟိုအဖွဲ့၏အတည်ပြုချက်ကို ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ မှတစ်ဆင့် ရယူပါသည်။18 ထို့ပြင် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်။19 သိသာထင်ရှားသည်မှာ “အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ပေးခြင်း၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့်ဆိုင်သော ပြည်ဝင်ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်း၊ ပင်ရင်းဒေသလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း၊ အခွန်ကောက်ခံမှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အလုပ်သမားပါမစ်နှင့် ခွင့်ပြု ချက်ချပေးခြင်း၊ စက်ရုံတည်ဆောက်မှုအတွက် ခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်းနှင့် ၊ အခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ၊ ခွင့်ပြုမိန့်များကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စု တစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနကို တည်ထောင်ထားရှိခြင်း”20 ကို စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက တာဝန်ရှိပါသည်။ အထူးစီးပွားရေးဇုန် တစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီနှင့် ပုံမှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများကို ပြုလုပ်ပါသည်။ သို့သော် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ တိကျသော အခန်းကဏ္ဍသည် မရှင်းလင်းသဖြင့် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် တာဝန်ခံမှုအားနည်းခြင်းသည် မြင့်မားလျက်ရှိကြောင်း သတိပြုရပါမည်။21
အထူးစီးပွားရေးဇုန်တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ဗဟိုအဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (ပြည်ထောင်စု ညီလာခံ – မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်နှစ်ရပ် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်) ၏ အတည်ပြုချက်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ကို လိုအပ်ပါသည်။22 အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက် သင့်လျော်သည့်နေရာကို အခြေခံအချက် ၈ ချက်နှင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေသည် ဗဟိုအဖွဲ့ကို “[အထူးစီးပွားရေးဇုန်]တည်ထောင်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့အတွက် အကျိုးရှိမည်ဟု ယူဆပါက” ၎င်းအချက် ၈ ချက်မှ သွေဖယ်ခွင့်ပြုထားပါသည်။23 အခြေခံအချက် ၈ ချက်မှ သွေဖယ်နေခြင်းကိုသော်လည်းကောင်း၊ မည်သည့်အ ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်းရှိသည်ကို သော်လည်းကောင်း ဗဟိုအဖွဲ့အနေဖြင့် ဖော်ပြရန် ဥပ‌ဒေတွင် မပါဝင်ပါ။ ထားဝယ်နှင့် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ၏ တည်နေရာများသည် အခြေခံအချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော ကြောင့် ယင်းနေရာများတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်း၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသ၏ တောင်ပိုင်းစီးပွားရေး စင်္ကြံ24နှင့် နီးကပ်နေခြင်းကြောင့် အချက် (က) ဖြစ်သော “ဆိပ်ကမ်း၊ လေယာဉ်ကွင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ ထွက်ပေါက်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ် သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းဈေးကွက်များသို့ အလွယ်တကူ သွားလာဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း” နှင့် ကိုက်ညီနေပါသည်။
တည်နေရာ အနေအထား –
ဆိပ်ကမ်း၊ လေယာဉ်ကွင်းကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာ ထွက်ပေါက်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ် သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းဈေးကွက်များသို့ အလွယ်တကူ သွားလာဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း
(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ဒေသဆိုင်ရာဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရွေးချယ်သတ်မှတ်သည့် နယ်မြေဖြစ်ခြင်း၊
(ဂ) အခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်များ တည်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် အလားအလာရှိခြင်း၊
(ဃ) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိနိုင်ခြင်း၊
(င) စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ထူထောင်ရန် လုံလောက်သော မြေနေရာရှိခြင်း၊
(စ) ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုအထိုက်အလျောက်ရှိသည့် အလုပ်သမားများနှင့် သင်ကြားလေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးနိုင်သေ အလုပ်သမားများရရှိနိုင်ခြင်း၊
(ဆ) လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်အလုပ်သမားများ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်၍ လေ့ကျင့်ပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊
(ဇ) နိုင်ငံတော်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အနေအထားအရ လည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့် အနေအထားအရလည်းကောင်း အချက်အချာကျသည့် အရပ်ဒေသ သို့မဟုတ် နယ်မြေဖြစ်ခြင်း။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေအရ ကင်းလွတ်ဇုန်နှင့် လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန် ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိပါသည်။25 သို့သော် စျေးကွက်လိုအပ်ချက်အရ အခြားဇုန်များကိုလည်း သတ်မှတ်ခွင့်သည် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီတွင် ရှိသည်။26
ကင်းလွတ်ဇုန် ဆိုသည်မှာ “အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း တည်ရှိသည့် ကုန်စည်များ၊ ယင်းဇုန်အတွင်းသို့ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများ ကောက်ခံခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ ပြီး သက်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနတို့ ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်သည့် နိုင်ငံတော်၏ပြင်ပတွင် ရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည့် နယ်မြေကို ဆိုသည်။”27 အထူးသဖြင့် ကင်းလွတ်ဇုန်သည် မြန်မာ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းသို့ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့် သတ်မှတ်နေရာမှ ရောက်လာသည့်သွင်းကုန်များ အတွက် အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်များသည် အခွန်အခများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို အနည်းငယ် ဖြေလျှော့ပေးသည်။ ကင်းလွတ်ဇုန်များသည် ပို့ကုန်ဦးစားပေးဈေးကွက်ကို ဦးတည်၍ လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဇုန်များသည် ပြည်တွင်းဈေးကွက်နှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်းရှိ ဈေးကွက်ငယ်များကို ဦးတည်ပါသည်။28
အထူးစီးပွားရေးဇုန်များသည် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား များစွာအကျိုးရှိစေပါသည်။ ဇုန်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်လျက် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များသည် အကောက်ခွန်လိုအပ်ချက်များ၊ အခွန်အခများ သို့မဟုတ် ဝင်ငွေခွန်များကို ဖယ်ရှား သို့မဟုတ် ဖြေလျှော့ပေးသည်။29 ဇုန်အမျိုးအစားနှင့်မသက်ဆိုင်လျှင်လည်း အထူးစီးပွားရေးဇုန်များတွင် နိုင်ငံခြားသားများသည် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်နိုင်သည်။30 ထို့အပြင် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သော ဥပဒေရေးရာ ရုံးစာလုပ်ငန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်လွယ်ကူစေပြီး လိုအပ်သောပုံစံများကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိစေပါသည်။31
အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသော ကုမ္ပဏီများသည် ပထမဦးစွာ မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနမှတစ်ဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့် အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တစ်ခုစီအတွက် လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် ယင်းဌာန၌ ရှိပါသည်။32
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်း၊၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အခွန်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပြည်ဝင်ခွင့်လျှောက်‌ထားခြင်း စသည့် လျှောက်ထားခြင်းများကို ဖြည့်ရပါမည်။33 ထားဝယ်နှင့် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန် နှစ်ခုလုံး၏ လျှောက်လွှာပုံစံများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား ၅ မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းကော်မရှင်ကို မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။34 35 ထို့ပြင် ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများဖြင့် ပစ္စည်းများထုတ်ဝေခြင်းကဲ့သို့သော အစိုးရ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားများသာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများလည်း ရှိပါသည်။36သို့သော် အထူးစီးပွားရေးဇုန်တစ်ခုစီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုထားသော စီးပွားရေးအမျိုးအစားကို လိုက်၍ သီးသန့်ကန့်သတ်မှုများရှိသည်။37
ထို့ပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အလုပ်သမားဥပဒေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေများ၊ မြေယာဥပဒေများ စသည့် အခြားဥပဒေများကိုလည်း လေးစားလိုက်နာရှိရမည်။ အခြားဥပဒေလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာန၏ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။38
အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများသည် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် ကြိမ်ဖန်များစွာ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရသည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ပြည်ဝင်ခွင့်နှင့် အခြားဆောင်ရွက်မှုများအတွက် တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုကို စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီက တာဝန်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။39
စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုသည် အထူးစီးပွားရေးဇုန်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ထားဝယ်နှင့် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးပါဝင်သည့် ‘တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှု’ ခလုတ်ပါ သည်။ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၌ သတင်းအချက် အလက်များကို အကန့် အသတ်ဖြင့်သာ ဖော်ပြထားသည်။40 လိုအပ်သောအလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုကို စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြချက်ပုံစံတွင် ပါရှိမည်ဟု ယူဆပါသည်။41
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် တည်နေရာစဉ်းစားသည့်အချက်များမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် လေဆိပ်နှင့်နီးကပ်စွာ တည်ရှိခြင်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။ Photo by @Lionslayer via Wikicommons, Licensed under CC BY-SA 4.0.
ယနေ့ အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ
၂၀၁၄ ခုနှစ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေကို အောင်မြင်သည့်အပိုင်း များသည်ဟု ယူဆကြပါသည်။ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို အောင်မြင်စွာ လွယ်ကူစေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက် များကို နေရာတစ်ခုတည်း၌ပင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါ သည်။ ထို့ပြင် သီလဝါ အထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ပိုမိုအောင်မြင်ဟန်ရှိကာ မကြာသေးမီကပင် နစ်ဆန် အီလက်ထရစ်နှင့် တိုယိုတာ ၂ခုလုံးမှ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများကို များစွာ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။42
အခြားသူများက ဥပဒေတွင် လိုအပ်ချက်များရှိကြောင်း ကွဲပြားစွာ ထောက်ပြကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင် (အိုင်စီဂျေ) က “အထူးစီးပွားရေးဇုန်များအတွက် မြေသိမ်းယူမှုလုပ်ငန်း စဉ်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ကာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ နိုင်ငံ၏မြေသိမ်းယူမှုဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်နေ ကြောင်း” ထောက်ပြခဲ့သည်။43 ထို့ပြင် သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် အပြုသဘောအာရုံစိုက်မှုကို ရရှိနေစဉ် ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်သည် ၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များအတွက် ပြန်လည်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများကြောင့် စဉ်းစားဖွယ်ရာ ဖြစ်နေသည်။44 ၎င်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုသည် သီလဝါနှင့် ထားဝယ် အထူးစီးပွားရေး ဇုန်များကဲ့သို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီပါ။45 ထားဝယ် အထူးစီးပွား ရေးဇုန်တွင် ပြင်းထန်သည့် လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာများရှိနေကြောင်း EarthRights International က ထောက်ပြခဲ့သည်။46 စီမံကိန်းကြောင့် သက်ရောက်မှုခံစားရသည့် နေထိုင်သူ ၄၃,၀၀၀ ၏ ၈ ရာခိုင်နှုန်းသာ စီမံကိန်းကို သဘော တူညီပြီး သက်ရောက်ခံစားရသူများ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသာလျှင် အစိုးရနှင့် ရင်းနှီးတည်ဆောက်သူများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့က ဖော်ပြသည်။47
1. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်, မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စာမျက်နှာ ၁၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
7. Ibid at 6-8.
8. Ibid at 9-10.
9. Ibid at 11.
10. သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ, ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
11. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်, စာမျက်နှာ ၅၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
12. Ibid at 6-8.
13. Ibid at 6.
14. Ibid at 8.
15. Ibid at 9-10.
16. Ibid at 10.
20. Ibid at 12-13.
21. ICJ. 2017. မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီပွားရေးဇုန်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်။ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
22. Ibid at 14.
23. Ibid at 15.
24. ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ။ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် – အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် နီးကပ်ခြင်း၊ မဟာမဲခေါင်ဒေသ၏ တောင်ပိုင်းစီးပွားရေး စင်္ကြံ ပြီးစီးခြင်း။ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
25. Ibid at 16.
27. Ibid at 2-3.
28. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
30. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။ စာမျက်နှာ ၁၆ နှင့် ၁၈ ရှိ ပြဌာန်းချက် ၁၅၊ ၂၄၊ ၂၇။ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
31. ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာန၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းတည်း အလုံးစုံဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာန၊ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
32. ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
34. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်, မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ, စာမျက်နှာ ၅၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
35. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
36. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
37. ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
38. ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး, ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး, Accessed June 14, 2019.
39. ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။ စာမျက်နှာ ၁၂၊ ၁၃၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
40. ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ ပင်မစာမျက်နှာ၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
41. ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြချက်ပုံစံများ၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
42. မြန်မာတိုင်းမ်၊ “နစ်ဆန် အီလက်ထရစ် ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများမှ မြန်မာသို့ ရွှေ့ခြင်း” ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။ မြန်မာတိုင်းမ်၊ “အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၃ သန်းတန် ပစ္စည်းတပ်ဆင်စက်ရုံ သီလဝါတွင် တည်ဆောက်ကြောင်း တိုယိုတာမှ ကြေညာ” ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
43. နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန် နိုင်ငံတော်၏တာဝန်, စာမျက်နှာ i, ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
44. မြန်မာတိုင်းမ် “ကျောက်ဖြူအတွက် ကြွေးမြီနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာက အောင်မြင်စွာ ပြန် လည်ညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့သည်၊”ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
45. ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ပင်မစာမျက်နှာ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ ကြိုဆိုခြင်း, ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ ကြိုဆိုခြင်း၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။
46. EarthRights International, ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်, ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ရရှိသည်။